गर्भावस्थामा सेक्स गर्ने उत्तम तरीका::mirmireonline.com
गर्भावस्थामा सेक्स गर्ने उत्तम तरीका
गर्भाअवस्थामा सेक्स गर्नु कत्तिको उपर्युत्त हुन्छ । यो धेरैको जिज्ञासाको पाटो हो । कोहि भन्छन् गर्भाअवस्थामा सेक्स गर्नु राम्रो हो तर कोहि यसलाई खतरनाक मान्छन् ।
कोहि महिलाहरु स्वयम पनि गर्भवती भएको थाहा पाएदेखि नै सेन्समा रुची राख्दैनन् तर कोहि अन्य दिनको तुलनामा अझ बढी चाहना राख्ने गर्छन् ।
चिकित्सकहरु भने गर्भाअवस्थामा सेक्स गर्नु गलत नभए पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउछन् । अन्य दिनको तुलनामा सो अवस्थामा सेक्स गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव हुन्छ ।
सेक्सका क्रममा पूर्ण आनन्द प्रदान गर्न आफ्नो पार्टनरलाई गर्भवती महिलाहरुले सक्दैनन् किनकि हर्मोन र शारीरीक दुवै कारणले यस्तो हुन्छ ।
तर सह सम्बन्ध र दुवै जना नजिक आउनाले पेटमा रहेको बच्चालाई समेत फाईदा पुग्दछ । किन कि आमा खुसी भईन् भने पेट भित्रको भ्रुणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
त्यसो भए यी तरीकाद्धारा तपाई सेक्स गर्न सक्नु हुन्छ , जसले सुरक्षित पनि र आनन्दित पनि बनाउदछ ।
१. महिला माथि रहने तरीकाः यो गर्वावस्थामा सेक्स गर्ने सबै भन्दा सुरक्षित तरीका हो । यो तरीका अनुसार महिला पुरुषको माथि रहनु पर्दछ । यो तरीकाबाट महिलामाथि र खासगरी पेटमा पुरुषको भारका कारण पर्ने असर हुदैन भने डिप पेनिट्रेसनका कारण पुरुषले पनि चरम आनन्द प्राप्त गर्दछ ।
२. रिभर्स काउगर्लः यो तरीकामा पुरुषले महिलाको पेट देख्न पाउदैन । पुरुषलाई साथीको ठूलो पेट देखेर सेक्स गर्ने ईच्छाशक्तिमा कमी आउन सक्छ । त्यसैले महिला केही निहुरिएर टेबलमा हात टेकेर रहन सक्छिन् र पुरुष तर्फ मुन्टो फर्काएर अनुहार देखाउन सक्छिन् । अनि पुरुषले सुरक्षित रुपमा सेक्स गर्ने मौका पाउछ ।
३. ल्यापटप: यो तरीका पनि खासै फरक छैन । यस अनुसार पुरुष कुर्सीमा बस्न सक्छन् । र महिलालाई पछिल्लो भागबाट अनुकुल हुने गरी सेक्स गर्न सक्छन् ।
४. एज अफ् द बेडः योे तरीका अनुसार महिला बेडको किनारामा बस्दछन् । र पुरुषले घुडा टेकेर या केही झुकेर संभाग गर्न सक्छन् । यो तरीकाले पनि गर्भवती महिला र बच्चालाई कुनै हानी पुर्याउदैन ।
समग्रमा सरल र सहज तरीकाबाट चाहेको बेला लोग्ने स्वास्नीले सेक्स गर्नु वैज्ञानिक कुरा पनि हो । तर यस्तो बेला सेक्स गर्दा कुनै जेल प्रयोग गर्नु भने हुदैन । यसले भ्रुण र आमा दुबैमा एलर्जी पैदा गर्ने संभावना बिद्यमान रहेको हुन्छ ।
के ‘आत्महत्या’ रोग हो ?
भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइदै
स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि सचेतना अभियान सुरु, यस्ता छन् आठ बुँदे प्रतिबद्धता
यस्तो छ नयाँ अध्ययन: वाइन पिउँदा प्रतिगिलास आधा घण्टाको दरले आयु घटाउछ !
जनस्वास्थ्य कार्यालयको समयावधी थप्ने तयारी
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीद्धारा लुम्बिनी अस्पतालको निरीक्षण